Posted by မေဓာဝီ at 6:12 PM
ဟုတ်တယ် မမေရေ... ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ဂ်မှာ လက်ရည်သွေးခဲ့ရတာ... စာရေးကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂါတွေကို အတုယူလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာ. မမေလည်း ကျွန်တော်အတုယူခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပေါ့. :)
ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ ပြောသလို ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာ ရှိချင်သော်လည်း ကိုယ့်ကို မုန်းတီးနေသူတွေ ရှိနေဆဲ ဆိုပေမယ့် ရန်သူမရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်မှာ မိတ်ဆွေစစ်မရှိဘူး ဆိုတဲ့ စကားလေးလည်း ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား။ တစ်ဖက်ကလှည့်တွေးလိုက်ရင် မမေမှာ မိတ်ဆွေစစ်တွေ ရှိလို့ ခါးခါးသည်းသည်း မုန်းတီးနေတဲ့ ရန်သူစစ်တွေလည်း ရှိနေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရန်သူကို ရန်သူမှန်း သိနေရတာကိုက ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပဲလေ။ မဟုတ်ရင် မြွေပွေးကို ခါးပိုက်ပိုက်မိလျက်သား ဖြစ်နေဦးမှာ...
ဘာပဲပြောပြော ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမေ.
ဆက်လက်ပြီး စာကောင်းပေမွန်လေးတွေ ရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ...
8/31/2013 6:34 PM
ဘလော့ဒေးလေးကို မအားတဲ့ကြားကနေပဲ ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေး ရေးထားတာမို့ ဖတ်ရတာ ကျေနပ်စရာပလေးပဲ ..မမ .. Happy Blog Day ..ပါမမ :)
8/31/2013 6:49 PM
ဒီဘလော့က ပို့စ်တော်တော် များများကို နှစ်သက်မိပါတယ်။ စောင့်မျှော် ဖတ်နေဦးမှာပါ။
8/31/2013 7:44 PM
အချိန် အခက်အခဲ၊ ကွန်နက်ရှင် အခက်အခဲတွေ ကြားကနေ ဘလော့ဂ်လေးဆီကို အပြေးအလွှား ပြန်လှည့်ဝင်လာတာ ဝမ်းသာမိတယ် မမေ...၊း) ဟိုး..အရင်တုန်းက တစ်နေ့တစ်ပုဒ် ရေးခဲ့သလို ကျနော့်ဆီမှာ ပို့စ်အသစ် တက်တိုင်းလည်း (အချိန်အားဖြင့်လည်း သိပ်မကွာတော့) အမြဲလိုလို ချက်ချင်းရောက်လာပြီး လာအားပေးခဲ့တဲ့ ကာလတွေကို ပြန်သတိရတယ်...၊
မမေရဲ့ ဘလော့ဂ်.. အနက်ရောင် ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာ အခုမှ သိရတယ်၊း)) ကျနော်သိတဲ့ အချိန်မှာ ပြာနေပြီ၊ အင်း.. တစ်ခါမှတော့ မ “နီ” ခဲ့ဖူးပါဘူးနော်...၊းP ဘယ်လိုအကြောင်းပဲ ရှိရှိပါ၊ ဘလော့ဂ်လောကကို သံယောဇဉ်ရှိပြီး စာရေးကောင်းတဲ့ မမေ.. ကျန်းမာစွာနဲ့ ရှိနေဖို့နဲ့ တစ်နေ့မှာဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂ်မှာ စာတွေ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ...။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ဘလော့ဂ်နေ့ ဖြစ်ပါစေနော်...။
8/31/2013 11:45 PM
နှစ်တိုင်း ဒီနေ့လေးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော် ခွန်အားတွေ အများကြီးပေးခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်လေး ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး
9/01/2013 4:49 AM
blogနဲ့ ဗြဟ္မဝိဟာရ အမြဲ သဟဇာတဖြစ်နေပါစေဗျာ။
9/01/2013 6:27 AM
Happy Belated Blog Day Ma Ma !
9/01/2013 8:24 AM
ရွှေပြည်က ဘလော်ဂါတွေရဲ့ ဇွဲသတ္တိကို အံ့မခန်းချီးကျူးဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ.....ဘ၀ရဲ့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တဲ့ ဘလော့လေးကို မမေ့ဘဲစာတွေများများကြီးရေးနိုင်ပါစေ....
9/01/2013 8:41 AM
စိတ်ဝင်စားစရာတော်တော်များများကို ဖတ်သွားခဲ့တယ် မမ...။
ဘလော့ဂ်ဟာ စာရေးသားခြင်းကို အားပြည့်စေခဲ့တယ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးလေ...။
ဘလော့ဂ်ဂါတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ဒီပို့စ်လေးတွေက တဆင့်မြင်ခွင့်ရလိုက်တယ်...။
ပျော်ရွှင်ပါစေ မမ..။ :))
9/01/2013 8:42 AM
သူကြီးမင်း မှတ်မိသလောက်တော့ အပြာရောင်ခေတ်ပါ။ အခုပုံစံမျိုးလေးအတိုင်းပါဘဲ။ ဟိုတုန်းက နက်ခဲ့ဖူးတာ အခုမှ သိရတယ်။ အင်း... နက်ပြာပိုင်ရှင်လေးကိုး။း)
အမ ရွှေစင်ဘလော့ကိုလဲ နေ့စဉ် ဟိုကပတ်ဝင် ဒီကပတ်ဝင်နဲ့ ၀င်ကြည့်တာ တစ်ခါမှ ၀င်လို့မရခဲ့ဘူး။ ဘာတွေဖြစ်နေကြတယ်မသိ အမရွှေစင်နဲ့ စစ တို့။
9/01/2013 10:12 AM
ပြည်တွင်းကနေပြီး နာမယ်အစစ် နဲ့ ရေးစရာရှိတာ ရဲရဲရင့်ရင့် ရေးခဲ့လို့ ဘလော့သွေးစည်းမူ နဲ့ စိတ်ပူပေးခဲ့ရဘူးတဲ့ ခေတ်ဦးဘလော့ဂါ တယောက်။
9/01/2013 11:36 AM
စာတွေအများကြီးရေးနိုင်တဲ့ မမဘဲနော်။ ဘလော့ဂ်ဒေးမှာရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများဖတ်သွားပါတယ်။
9/01/2013 5:13 PM
ပျောက်တော်မူလိုက်တာဗျာ...ဒီကြားထဲမှာ သုံးပုဒ်လား ခပ်ဝါးဝါး ဖတ်ရတယ် ထင်တာပဲ...အလုပ်များတာလဲ များတာပေါ့ ဘလော့ရွာလေးကိုလည်း လှည့်ကြည့်ပါဦး...
ဘလော့ဟာ ဘ၀ကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ...
အကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂါမို့မနက်မိုးလင်း ဘလော့တွေဆီအလည်သွားရင် ပထမဆုံးလည်ဖြစ်တဲ့ဘလော့လေးပါ. အလုပ်ရှုပ်နေတာသိနေပေမယ့် စာလေးတွေလဲမကြာမကြာဖတ်ချင်နေမိတာ ခွင့်လွတ်ပါ မေရေ. အမမှာလဲ ခုထိစီဘောက်စ်မရှိဘူးလေ.
ဆရာမပီပီ ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ ခွဲရေးသွားလိုက်တာ..ဖတ်လို့ကောင်းမှကောင်း။
မမေစာတွေ ဘလော့မရေးခင် ဟိုးထဲက ဖတ်ခဲ့သူပါ။ စီဘောက်စ်ကတော့ ကိုယ်တိုင်လဲ နာမည်ဝှက်နဲ့ လူ့အန္ဓတွေကြောင့် ဖြုတ်ထားရတယ်။ အဆုံးသတ် ဘ၀ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမျှသာဆိုတာလေး သဘောကျတယ်။ ဘယ်အရာမှ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တာမှ မရှိတာလေနော်။ စာလေးတွေတော့ မကြာမကြာ ရေးပါ..။ အမြဲတမ်းအားပေးလျှက်ပါ။
မနေ့က ရေးခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်မတက်ဘူးထင်လို့ ထပ်လာကြည့်တာ မမေရေ.. ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ..။ ဒါနဲ့ ထပ်ရေးသွားတယ်.. :D
ဆရာမပီပီ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ခွဲပြီး ရေးပြသွားတော့ မမီခဲ့တဲ့ ဘလော့အစကိုပါ မျက်လုံးထဲ ပုံဖော်နေမိတယ်။
မမေစာတွေကို ဘလော့မရေးခင်ထဲက ဖတ်ခဲ့သူဆိုတော့ စာတွေ ရသလောက်ရေးပါလို့ပဲ တောင်းဆိုပါရစေနော်..။
9/04/2013 6:02 AM
ဘလော့က ကျမ ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုမျှသာ …
မမမေ ပျောက်ချက်သား ကောင်းလှချည်လား...အားရင် ဘလော့ဆီ ပြန်လာပါဦး...
9/04/2013 7:15 PM
ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေ၊ ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ တော်တော်လေးကို ဝေေ၀ဆာဆာ၊ လှလှပပ၊ ကျကျနန၊ ဂဃနဏ၊ ပီပီပြင်ပြင်ကို ရေးသားထားတယ်နော်။ ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းတယ်...
ကျန်းမာပျော်ရွှင် ကြည်လင်ဝင်းပ အေးမြပါစေ မမေရေ...
9/05/2013 6:34 PM
ပြည့်စုံတဲ့ ... ဂရုတစိုက် ... သုံးသပ်ဖော်ပြချက်လေးတွေပါ ခင်ဗျာ ... ။ တကယ် ... Blogger တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်လွန်းခဲ့ပါတယ် ။ Ning.com မှာ ... ဖတ်ခဲ့ရတာတွေ ... ဟိုး အစ Blogger တွေ ... ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး အချိန်တွေ ... Blogging Sphere ထဲကို ပါဝင်ခဲ့ချင်တာပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ... နည်းပညာ က ဘာမှ မတတ်တော့ ... သတင်းတွေနဲ့ Mail ထဲကို ရောက်လာသမျှတွေနဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရတာပါ ခင်ဗျာ .. ။
ဒီနှစ် Blog Day အထိမ်းအမှတ် နဲ့ Blogging Sphere က ပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာသလို ... တကယ့် Blogger ကြီးတွေ Post တွေ ပြန်ရေးလာတာကို ဖတ်ရတော့ ... တကယ်ပဲ ထပ်ထူထပ်မျှ ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ် ခင်ဗျာ ... comment ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး အစ်မရေ ... ။ အစ်မ ပြောသလို c-box က လည်း မရှိတော့ ... ကိုယ် ပြောချင်တာလေးတွေ ပေါ်လာတာကို ပြောတတ်သလိုလေး ပြောခဲ့တာပါ ... ။ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ ...
9/06/2013 7:51 AM
ဟောဗျာ....ဘလော့ဒေးမှာ တို့အစ်မလည်း ပြန်ပေါ်
9/07/2013 7:27 AM
ကျနော်ကတော့ အစ်မကို ဟိုးအစကတည်းက သိတယ် စာတွေ တိတ်တိတ်ကလေး ဖတ်ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်ကျနော် စာပြန်ရေးပြီးမှ ကော့မန့်လေးတွေရေးရင်း အသွားအပြန် ရှိလာတော့တာ ။ အဲ့တော့မှပဲရင်းနှီးလာသလို မမေ ကော့မန့်လေးတွေရရင်ပျော်တယ် သေသေချာချာလေး ဂရုတစိုက်ဖတ်တာ သိသာတယ် ။
ဟူတ်ပါ့ အရင်က ဘလော့မှာပျောက်ကြရင် တကယ့်ကိုယ့်အိမ်သာ ကိုစိတ်ပုသလို နေကောင်းရဲ့လား အလုပ်များနေလားမေးရတာ အမော ။
ဒီိတိုင်းလေး စီးမျောကြအုံးစို့း)
9/10/2013 9:33 AM